ဣသရေလအမျိုး၌အနှစ်ပြည်နယ်ဖြေရှင်းချက် | Apg29
NILS အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ်
Donald Trump, ဗင်္ယာမိန်ဟူး, အစ္စရေးရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူအမေရိကန်သမ္မတယခုငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုနှစ်ခုပြည်နယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာတိုင်းပြည်ထို့နောက်ပါလက်စတိုင်းအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးတို့အကြားဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်။ ဂျေရုဆလင်ပင်မြို့ထို့နောက်အစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့အကြားဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ ဒါဟာထုတ်ပြန်ကြေညာမည်ဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ9ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲ, ဣသရေလအမျိုး၏ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စိတ်ကူးထို့နောက် Two-ပြည်နယ်ဖြေရှင်းချက်ဂျူးလူတို့တွင်ဆန္ဒပြပွဲများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုသောရွေးကောက်ပွဲကို, သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့မကြောင်းပါ! ဒါဟာအမေရိက၏ပင်ယုဒလူတို့နှစ်ပြည်နယ်ဖြေရှင်းချက်များအတွက်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည် Enarson ကပြောပါတယ်။
ကမဖြစ်စေဘဲဒါကြောင့်သူအခုခရစ်ယာန်ကနေပဌနာကိုခေါ်, သခင်ဘုရားသည်ဤမှားအစီအစဉ်ကိုထား! ဧသတာအစာရှောင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အချိန်အတွက်ယုဒအမျိုး၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဘို့ဆုတောင်းတူသော Lars, ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်သောနေ့၌မတ်လ 20 မှတောင်းဆိုထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဣသရေလအမျိုး, ဒီနှစ်မတ်လ 20 မှ 21 purimsfesten အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။
ကျနော်တို့ယောလထဲမှာမြင်ရတဲ့ဒီလေးနက်မှု။ 3:2။
"ထိုအခါငါလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုသိမ်းယောရှဖတ်ချိုင့်သို့သူတို့ကိုငါသက်ရောက်စေမည်ကို၎င်း, အဲဒီမှာသူတို့အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့တွင်ကွဲပြားစေသောကြောင့်ငါ၏လူတို့သည်ငါ၏အမွေဥစ္စာသည်, ဣသရေလအမျိုးအဘို့ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုငါစစ်ကြောစီရင်, ငါ့မြေယာခွဲပါလိမ့်မယ်။ !"
ဒါဟာ turnaround နားမလည်ပေါ်လာသောအဘယ်ကြောင့် Donald Trump အစ္စရေး၏ခွဲခြားမြို့တော်အဖြစ်ဂျေရုဆလင်ကိုအသိအမှတ်မပြုကြောင်းဒီဇင်ဘာလ 2017 ရဲ့အစမှာသာပဲ!
ဣသရကိုဝေရန်ကြိုးစားခဲ့သူကိုသမ္မတဟောင်းအမြဲတမ်းတန်ပြန်စီးနင်းထားသည်, ဒါကြောင့်ပင်ဤသည်၌, အမေရိကန်သမ္မတဆက်ဆက်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီယုံကြည်ချက်မှတဆင့် M-အရှေ့မှငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်စေဖို့ကြောင်းကို Donald Trump ရဲ့အလိုဆန္ဒဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်အရှင်၏မြေယာနှင့်မြို့အဖြစ် undivided လျက်ရှိနေကြမည်ကိုအဣသရေလပြည်နှင့်ထိုမြို့၌ဖို့ဆုတောင်းစေ, ဒီသေးငယ်တဲ့တိုင်းပြည်ထာဝရဘုရားသည်မိမိတိုင်းပြည်ကိုခေါ်ဆိုသိမ်းယူ။ ဒါဟာသူမကြာမီပြန်လာကြလိမ့်မည်သည့်အခါသခင်ယေရှုခရစ်စိုးစံလိမ့်မည်ဟုယေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်ပါတယ်။
Apg29 ထက်အခြားဖွငျ့ဖြစ်ကြောင်းဆောင်းပါးများနှင့်ဗီဒီယိုများကို။ ယခုသင်ဘလော့ဂ်ဆိုဒ်ကိုမျှဝေပေးမထင်မြင်ချက်များရှိနိုင်ပါသည်။
Publicerades tisdag 12 mars 2019 12:07 | | Permalänk | Kopiera länk | Mejla
David 12/3-2019, 15:56
Erik S 12/3-2019, 16:09
Lukas 12/3-2019, 17:14
Bengt 12/3-2019, 19:08
Tom 12/3-2019, 19:34
Nils-Olof Billström 12/3-2019, 19:49
Tom 12/3-2019, 20:45
David 13/3-2019, 09:00
Maria 13/3-2019, 09:49
SA 13/3-2019, 15:22
Stefan Jonasson 13/3-2019, 19:52
Lukas 15 det förlorade fåret.. Gläd er med mig alla vänner och grannar.. Jag har funnit mitt förlorade får 🐑.. På samma sätt blir det blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver... Omvändelse i detta sammanhang betyder att ha blivit funnen och frälst av JESUS, som är den gode herden han lämnar de 99 och söker det förlorade TILLS HAN FINNER...
Vecka 34, söndag 25 augusti 2019 kl. 21:45
söndag 25 augusti 2019 15:04
Är tacksam till Gud att jobbarhelgen gått relativt bra.